साइन इन होम डेकोरेशन, होम डेकोरेशन वाल हूक, वाल मिरर चीन निर्माता र आपूर्तिकर्ता - मिन्हू किंगहोम आर्ट्स एंड शिल्प कं, लिमिटेड।
Minhou KingHome कला और शिल्प कं, लिमिटेड, Minhou Wangda कला र शिल्प कं, लिमिटेड प्रयोग किया जाता एक पेशेवर निर्माता और मुख्य भूमि चीन मा शिल्प को निर्यातकर्ता हो। हामी साइन इन होम डेकोरेशन, गृह सजावट भित्ता हुकहरू, वाल मिरर बनाउन र डिजाइन गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरु लाई उत्पादनहरु प्रदान गर्न विश्वास गर्दछौं जुन गुणहरुमा उत्कृष्ट, डिजाइनमा अद्वितीय, मूल्यमा प्रतिस्पर्धी र सेवामा उत्कृष्ट छ। वर्षको निर्माण र निर्यात अनुभवले हामीलाई हाम्रो ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिष्ठा पनि दिन्छ।
पवनचक्की वाल हुक
यो पवनचक्की वाल हुक तपाईंको स्टाइलिश घरलाई विन्डमिल धातु वाल हुक जस्ता एक्सेंटहरूको साथ अपडेट गर्नुहोस्! यस जस्ती धातुको सजावटले रिस्ट विवरण र तल एकल हुकको साथ घुमाउने पवन चक्की आकार प्रदान गर्दछ। बैठक कोठा, बेडरूम, र कार्यालयहरूमा बिभिन्न पर्खालमा यसलाई स्थापना गर्नुहोस्! समावेश गर्दछ: १ सजावट
ठूलो पवनचक्की गृह सजावट भित्ता हुक
यो ठूलो पवनचक्की गृह सजावट वाल हुक तपाईंको स्टाइलिश घरलाई विन्डमिल धातु वाल हुक जस्ता एक्सेंटहरूको साथ अपडेट गर्नुहोस्! यस जस्ती धातुको सजावटले रिस्ट विवरण र तल एकल हुकको साथ घुमाउने पवन चक्की आकार प्रदान गर्दछ। बैठक कोठा, बेडरूम, र कार्यालयहरूमा बिभिन्न पर्खालमा यसलाई स्थापना गर्नुहोस्! समावेश गर्दछ: १ सजावट
क्रिसमस काठ र धातु शिल्प ह्या .्ग गर्दै
यस काठको क्रिसमस पट्टिका हेर्नुहोस्! हरियो होली पात र रातो फल, जस्ती लोहा शब्द "JOY" फिचर गर्दछ र तपाइँको कोठाको सजावटको लागि उपयुक्त छ। तपाईं यो क्रिसमस काठ र धातु शिल्प तपाईंको भित्तेमा झुन्ड्याउन सक्नुहुन्छ, अन्तिम टेबल वा तपाईंको म्यान्टलमा यस छुट्टीको मौसम!
ठुलो वाल घडी सेतो धुलाई काठ फ्रेम
घरमा ठूलो पर्खाल घडी व्हाइट वाश काठ फ्रेमको आकर्षण ल्याउनुहोस्। एक देहाती ह्वाइटवशेड फ्रेम वरिपरि घेरिएको फलामका अंकहरू परिणत लालित्यको उत्तम मिश्रण सिर्जना गर्न।
फार्महाउस ठूलो भित्ता घडी
घर फार्महाउस ठूलो भित्ता घडीको आकर्षण ल्याउनुहोस्। एक देहाती ह्वाइटवशेड फ्रेम वरिपरि घेरिएको फलामका अंकहरू परिणत लालित्यको उत्तम मिश्रण सिर्जना गर्न।
वर्ग दर्पण बहु रंगीन
यो स्क्वायर मिरर बहु ​​रंगीन पुनः प्राप्त काठ एक नजर हो जुन सबैलाई मनपर्दछ। यो अपीलमा कोर्दै, स्क्वायर मिरर बहु ​​रंगीन ऐना घरको उच्चारण हो जुन तपाईंको ठाउँलाई समृद्ध बनाउँदछ।